3- Kylian Mbappe : Kylian Mbappé oo hadda loo karo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu cad ee ku guulaysan doona abaal marinta Ballon d’Or ayaa wacdaro ka soo dhigay koobkii aduunka wuxuuna door fiican ka soo ciyaaray in xulkiisa France uu ku guulaystay koobkii aduunka.
Laakiin sababta uu Kylian Mbappé u noqday xidiga waqti xaadirkan ugu cad cad ee abaal marinta Ballon d’Or kuma koobna oo kaliya in uu xulkiisa koobka aduunka ku soo hogaamiyay balse waxaa u xisaabsan gool dhalintiisii 12 kii bilood ee ugu danbeeyay ee heerka kooxeed iyo heerka qaran oo laysku daray.
Tusaale ahaan Kylian Mbappé waxa uu haddaba 11 gool ka soo dhaliyay horyaalka France ee xili ciyaareedkan wuxuuna soo caawiyay 5 gool taas oo la micno ah in uu 16 gool oo kooxdiisa PSG dhalisay uu ku soo lug lahaa waana sabab sii xoojinaysa wax qabadkiisii koobka aduunka iyo shaqadii uu PSG u soo qabtay xili ciyaareedkii la soo dhaafay qaybtiisii labaad.
Kylian Mbappé ayaa xili ciyaareedkan ka gool dhalin sareeya xidigo badan oo magac wayn oo ay ku jiraan Ronaldo iyo Messi waana sababta loogu arko in uu yahay xidiga inta ugu badan u qalma abaal marinta ballon d’Or.
Laakiin waxaa lays waydiinayaa miyuu Kylian Mbappé xulkiisa France kaga saamayn badnaa Antoine Griezmann oo aan xataa lagu soo darayn saddexda xidig ee ugu sareeya? Jawaabtu waxay noqonaysaa in Griezmann laftiisu uu ka mid ahaan lahaa xidigaha u qalma balse ay codbixintu meel xun dhigtay sida hadda la fahansan yahay.